Njengoba yaziwa, ukukhwehlela kuyindlela yemvelo yokusabela lapho komzimba, okuyinto eyenzeka ngenxa kuhlasimulise mucosal izilonda izici (amagciwane amagciwane Amagciwane izifo ezihlukahlukene, uthuli, nomzimba). Ngeshwa, ukukhwehlela kungenzeka hhayi kuphela abadala kodwa futhi izingane, futhi Kulo mBhalo, ukuphathwa kufanele sinikezwe ngokucophelela okukhulu, njengoba izidakamizwa isilinganiso esithathwa umzimba wengane bengafani izidakamizwa avame engabelwe ekwelapheni abantu abadala. Abazali abaningi zama ukuqala ukuzama ezinye ethandwa ukukhwehlela ikhambi izingane bese afune usizo imikhiqizo zemithi, uma imithi nontraditional ayibanga namandla.
Uma sikhuluma ngqo mayelana nokwelashwa ukukhwehlela ezinganeni amakhambi abantu, lo imithi ehlukile kulokhu kwenziwa ukuxhumana kudala - le ndlela sokuphulukiswa ubelokhu eziningi abasekeli ngenxa ukusebenza kahle eliphezulu futhi ngokushesha Dynamics omuhle.
Njengengxenye amalungiselelo noma imithi yolunye uhlobo kunoma isiphi isimo, kukhona amakhambi ahlukahlukene ukuthi ungakwazi balahle lamagciwane abanga ukukhwehlela, kodwa ingabe akukhona ukulimaza umzimba wengane. Okuvame kakhulu abantu ikhambi ukhwehlela izingane - esifubeni iqoqo, okuyinto angathengwa ngasiphi ekhemisi. Njengengxenye yalolu lokulungiselela inhlanganisela ethile yamakhambi ezithathwe enkulu alinganayo. Kodwa ungakhohlwa ukuthi amanye amakhambi kungadala komzimba ingane, ngokulandelana, ngisho nalapho esebenzisa le ndlela yokwelapha njalo kufanele uthintane wezingane wesifunda. Ngokwesibonelo, yokwelashwa popular ukhwehlela ezinganeni esebenzisa licorice, oyingxenye ye ezinye izimali kungase nomkhwezeli uma ingane umzimba kuyinto ebucayi kakhulu. Ngaphezu kwalokho, lo isiraphu zalesi sitshalo contraindicated diathesis.
Umphumela ezithakazelisayo ukukhwehlela unika isanqante juice okufanele zixutshwe ngezabelo alinganayo ngamanzi, unezela amathisipuni eziningana uju. Thatha khambi Folk ukhwehlela izingane kufanele okungenani isipuni kathathu ngosuku kuze ukudla kwakho olandelayo. Ungakhohlwa mayelana black isithombo, ukuphumelela eyaziwa kusukela ezikhathini zasendulo. Ukuhlikihla impande, kufanele amnike phisa uju, futhi ijusi okuholela ukuthatha isipuni. Nokho, ungasebenzisi leli khambi Folk ukhwehlela izingane ngaphandle kokukhuluma nodokotela, ngoba juice isithombo kungaba kakhulu abakucasulayo ulwelwesi isisu baxabane nomzimba. Kulabo izingane abangafuni ngempela unayo i yokungezwani komzimba ukuze ezisawolintshi, ungazama okwelapha lemon, okukuvumela ukuba ngokushesha futhi ngokuphepha balahle kukhwehlela. Izithelo ngokuvamile kufanele ubilise ngesikhathi ukushisa low imizuzu eyishumi, ngemva kwalokho ijusi lemon kumele ukumpintsha beaker, engeza glycerin (wezipuni ezimbili) futhi uthele ku uju phezulu. ukwakhiwa okunjalo kufanele kuthathwe okungenani kabili ngosuku, kuyasiza ukusula amaphaphu bronchi.
Barberry: izakhiwo zokwelapha kanye contraindications. Barberry impande: ayelapha
Ukuphathwa Ukuhlola Amakhambi Okwelapha yesifuba somoya
Ukwelashwa nomfutho wegazi ophezulu ngaphandle izidakamizwa. ukwelashwa okuphumelelayo nomfutho wegazi ophezulu ngaphandle izidakamizwa
Itiye Camomile: izinzuzo futhi efanele ibe kuhlu lokuhlukumezeka, zokupheka best, Izimo, futhi isicelo
Yiziphi ngesaba abantu? Zokwesaba nokwesaba amadoda